सातामा दुई दिन बिदा, बजार खो’लिने, सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने - Nepali in Australia
सातामा दुई दिन बिदा, बजार खो’लिने, सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने
June 19, 2021 autherLeaveaComment on सातामा दुई दिन बिदा, बजार खो’लिने, सवारीसाधन पनि सञ्चालन हुने
करिब दुई महिनाको लकडाउनले हुँदा खाने नागरिक निकै आ’त्तिएका छन् । मजदूर वर्गलाई लकडाउनले निकै स’मस्यामा पारेको छ । मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु अब लकडाउन खुल्ने आशमा छन् ।
यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै देशभर जारी लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन हुने भएको छ । को-भि’ड-१९ सं’कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र स्मार्ट लकडाउन जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।जसअनुसार सातामा दुई दिन बिदा हुने गरी निजी र सार्वजनिक सवारी-साधनमा जोर-बिजोर लागु गरिने भएको छ ।
सरकारी कार्यालय र अन्य सीमित क्षेत्र खुलाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ । कुन-कुन क्षेत्रमा के-के गर्न दिइने भन्नेबारे अवस्था बुझेर निर्णय गरिने सीसीएमसीका कार्यकारी निर्देशक बालानन्द शर्माले जानकारी दिएका छन् । शर्माका अनुसार असार ७ पछि पनि लकडाउनले निरन्तरता भने पाउनेछ ।
को’रोना संक्रमणदरको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेर त्यसैअनुरुप स्वास्थ्य मा’पदण्डमा क’डाइ गरी चरणबद्ध रुपमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लगिनेछ बताइन्छ ।अब अन्य व्यापार, व्यवसाय खुलाउन दिइने भएको छ । स्मार्ट लकडाउन जारी भएपछि समय तो’केर विभिन्न किसिमका पसलहरु खोल्न दिइनेछ ।
खाद्यान्न पसललाई ९ बजेसम्म खोल्न दिने गरी समय तोकिनेछ । कपडा पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल १० देखि १२ बजेसम्म खोल्ने समय मिलाइनेछ । यस्तै, हार्डवेयर पसल दिउसो १ देखि ४ बजेसम्म खोल्न दिइने समय तालिका बनाइनेछ । विकास निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योग स्वास्थ्य माप’दण्ड पालना गरी खोल्न दिइने बताइन्छ ।
उद्घाटन भएको पाँच महीना नपुग्दै बाढीले ढाल्यो हेलम्बु प्रहरी चौकी
Breaking : सरकारले गर्यो वृद्ध भत्ता र एकल महिला भत्तामा नया व्यवस्था ! पूरा पढ्नुहोस –
आज राती १२ बजे देखी सबै बन्द।सार्वजनिक सवारी चल्न पनि बन्द?
July 31, 2021 auther
प्रशासन निषेधाज्ञा खुकुलो पार्ने पक्षमा, स्वास्थ्य भन्छ-जोखिम घटेको छैन